“တချို့မိဘတွေက ကျောင်းအပ်ဖို့ကလေးတောင်မရှိတော့ဘူး” လို့ ဝမ်းနည်းစွာ မိဘတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…. – Cele Oscar
“တချို့မိဘတွေက ကျောင်းအပ်ဖို့ကလေးတောင်မရှိတော့ဘူး” လို့ ဝမ်းနည်းစွာ မိဘတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်….
May 4, 2021 By L YC News
ပရိသတျ ကွီးရေ.. အနုပညာ လောက မှာ ပရိသတျတှေ ရဲ့ တဈခဲနကျ အားပေး ခဈြခငျမှု တှေ အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ ဇာတျပို့ သရုပျဆောငျ တှထေဲ မှာ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ ကလညျး တဈဦးအပါ အဝငျ ပါပဲ..။နှိုငျးယှဉျလို့ အမြားက ခဈြစနိုး ချေါကွ သလို ဇာတျကား တှမြေားစှာ ရိုကျကူး ထားတဲ့ သူမ ကတော့ လကျရှိအခွအေနေ တှမှော လှူဒါနျးမှူ တှေ တတျနိုငျ သလောကျ ပွုလုပျ နပွေီး ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ ရပျတညျ နသေူ လညျး ဖွဈပါတယျ..။
နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ ကတော့ လတျတလော ဖွဈပျေါ နတေဲ့ အခွအေနေ တှေ အမြိုးမြိုး ကွောငျ့ ကြောငျးသား မိဘ တှေ အနနေဲ့ ကိုယျ့ကလေး တှေ ကြောငျးမအပျရလို့ ဝမျး မ နညျးကွဖို့ ကို စိတျမကောငျးစှာ နဲ့ တိုကျတှနျး ပွောပွ လာပါတယျ..။တျောလှနျရေး တိုကျပှဲကွီး မှာ အသကျ ပေးသှား ကွရတဲ့ ကြောငျးသား ပွညျသူတှေ ရှိပွီး တခြို့ မိဘတှေ ကြောငျးအပျ ဖို့ ကလေးတောငျ မရှိကွတော့တဲ့ အကွောငျးတှေ ကို နှိုငျးယှဉျက စိတျမ ကောငျးစှာ ပွောပွ ထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
“ကိုယျကလေး ကြောငျးမအပျ ရလို့ ဝမျးနညျး မနပေါနဲ့ရှငျ ။တခြို့ မိဘတှေ ကြောငျးအပျ ဖို့ ခလေးတောငျ မရှိကွတော့ပါဘူး😭..” ဆိုပွီး စိတျမကောငျးစှာ ရေးသား ပွောပွ ထားတာ ဖွဈပါတယျ..။သူမရဲ့ ပို့ဈ အောကျမှာတော့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျ ဖွဈသလို မိခငျ တဈယောကျလညျး ဖွဈတဲ့ နှိုငျးယှဉျ ရဲ့ ပွော စကား အတှကျ ပရိသတျ တှကေလညျး ကြေးဇူးတငျ နကွေသလို အား​ပေး စကားတှလေညျး ပွောထား ကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
Photo Credit – Nhying Shin’s Fb Acc
ပရိသတ် ကြီးရေ.. အနုပညာ လောက မှာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေး ချစ်ခင်မှု တွေ အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် တွေထဲ မှာ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ကလည်း တစ်ဦးအပါ အဝင် ပါပဲ..။နှိုင်းယှဉ်လို့ အများက ချစ်စနိုး ခေါ်ကြ သလို ဇာတ်ကား တွေများစွာ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ သူမ ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေ တွေမှာ လှူဒါန်းမှူ တွေ တတ်နိုင် သလောက် ပြုလုပ် နေပြီး ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ရပ်တည် နေသူ လည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ကတော့ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အခြေအနေ တွေ အမျိုးမျိုး ကြောင့် ကျောင်းသား မိဘ တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေး တွေ ကျောင်းမအပ်ရလို့ ဝမ်း မ နည်းကြဖို့ ကို စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ တိုက်တွန်း ပြောပြ လာပါတယ်..။တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီး မှာ အသက် ပေးသွား ကြရတဲ့ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေ ရှိပြီး တချို့ မိဘတွေ ကျောင်းအပ် ဖို့ ကလေးတောင် မရှိကြတော့တဲ့ အကြောင်းတွေ ကို နှိုင်းယှဉ်က စိတ်မ ကောင်းစွာ ပြောပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
“ကိုယ်ကလေး ကျောင်းမအပ် ရလို့ ဝမ်းနည်း မနေပါနဲ့ရှင် ။တချို့ မိဘတွေ ကျောင်းအပ် ဖို့ ခလေးတောင် မရှိကြတော့ပါဘူး😭..” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသား ပြောပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။သူမရဲ့ ပို့စ် အောက်မှာတော့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်သလို မိခင် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ နှိုင်းယှဉ် ရဲ့ ပြော စကား အတွက် ပရိသတ် တွေကလည်း ကျေးဇူးတင် နေကြသလို အား​ပေး စကားတွေလည်း ပြောထား ကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ကရင်ပြည်နယ် ပလောတခေါ ရွာလေးတွင် ရေအခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ပေးမယ့် ကိုထူးအယ်လင်း VEDIO
သူမသေခင်မှာ မြင်တွေ့ သွားချင်တဲ့ အိမ်မက်မြို့တော်လေးရဲ့ ပုံစံကို ပရိတ်သတ်တွေ အားပုံဖော်ပြလိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)